Nagu saabsan | Shirkadda Zhongrong Technology Co., Ltd.
Shirkadda Teknolojiyada Zhongrong Ltd.
Horumarinta horumarka bulshada iyada oo loo marayo hal-abuurnimo saynis oo waara
Zhongrong Technology Corporation Co., Ltd. (koodhka kaydka: 836455), waxaa la aasaasay 1999 kaas oo ka mid ah shirkadaha Shiinaha ee Shiinaha ee ku takhasusay R&D, wax soo saarka iyo suuq geynta ethanol aan hadhuudh lahayn oo leh alaabteeda hoose. Waa soo saaraha ugu weyn ee aan soo saareyn ethanol ee Shiinaha, iyo soo saaraha ugu weyn ee acetate ee Waqooyiga Shiinaha iyo Waqooyiga-Bari Shiinaha. Badeecadaha waxaa loo iibiyay labadaba suuqyada gudaha iyo Aasiya, wadamada yurub iyadoo sanadkii ay soo gasho USD150 milyan. Waxay leedahay laba shirkadood oo hoosaadyo wada leh, Tangshan Zhongrong Technology Co., Ltd iyo Shanghai Zhongrong Technology Co., Ltd.
Waxaan diiradda saareynaa qaybaha warshadaha bayoolaji, kiimikada dawooyinka, kiimikooyinka ganaaxa iyo tamarta cusub iyada oo ujeedadu tahay kobcinta horumarka bulshada iyadoo loo marayo hal-abuurnimo cilmiyeed waarta oo xoogga saareysa R&D, wax soo saarka, suuq geynta ethanol aan hadhuudh lahayn iyo sidoo kale kor iyo hoosba alaabooyinka, oo u heellan inuu noqdo iibiyaha ugu tartamaya ee ethanol aan hadhuudh lahayn.
Zhongrong Technology Corporation Ltd. waxay leedahay 3 Gobol R&D Center waxayna heshay in kabadan 11 guulo cilmiyeed iyo tiknoolajiyadeed oo ka sareeya heerarka hogaaminta gudaha, iyo sidoo kale in kabadan 42 shatiyada caalamiga ah & kuwa gudaha. Waa sharaf weyn inaan qabannay Barnaamijka Tooshka Qaranka iyo Barnaamijka Waxsoosaarka Cusub ee Qaranka. Waxaan nahay shirkaddii ugu horreysay ee Shiinaha si aan u horumarinno ethanol aan hadhuudh lahayn oo aan u gaarno guulo iyo sidoo kale shatiyada la xiriira. Waxaan haynaa aqoon sare oo dhanka maamulka ah iyo hibooyin teknolojiyadeed oo ka socda jaamacado badan oo caan ah, waxaanan noqonay curiyaha iyo aasaasaha heerka warshadaha Shiinaha ee ethyl ethanol.
Teknolojiyada Zhongrong waa waaxda agaasimaha fulinta ee Ururka Aalkolada ee Shiinaha, waa qeybta agaasinka ee Isbahaysiga Horumarinta Cagaaran ee Shiinaha, iyo ganacsiga muujinta hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed ee Shiinaha ee batroolka iyo kiimikada. Muddo sanado ah, waxaan ururinay macaamiil wadashaqeyn muddo-dheer nagu filan oo aan sameysanay nidaam shabakad iib ballaaran ah, oo aan ku koobnayn oo keliya dalka oo dhan, laakiin sidoo kale u dhoofinaya suuqyada Aasiya, Yurub iyo Koonfurta Ameerika. Dhiirrigelinta iibka internetka ee soo jireenka ah ka sokow, shirkaddu waxay sidoo kale heshiis iskaashi istiraatiiji ah la gashay shey kiimiko ballaadhan oo isku dhafan si loogu oggolaado wax soo saarka shirkadda inay u adeegaan macaamiil badan. Waxaan rajeyneynaa dadka leh fikradaha sare inay noqdaan macaamiisheena.
Iyada oo ku saleysan ethanol-aan-hadhuudh, waxaan kor u qaadida dhismaha mashruuca wax soo saarka ethanol iyadoo la isticmaalayo gaaska warshadaha birta, iyo horumarinta tiknoolajiyadda ethanol cellulosic, iyadoo la ogaanayo hirgelinta warshadaynta dhaqaale ee suurtogalka ah, iyo foojignaanta si loo gaaro 1 milyan oo tan oo ah awoodda wax soo saarka ethanol ee gudaha 3-5 sano. Isla mar ahaantaana, waxaan isticmaaleynaa gaaska dabada ah si aan uga soo saarno hydrogen, baaritaanka ku saabsan qiimaha sare ee lagu daro codsiyada hoose ee tamarta hydrogen, iyo dhisida saldhig tamar nadiif ah.
Soo bandhigida awoodda wax soo saar
Shirkaddu inta badan waxay diiradda saareysaa laba nooc oo dariiqyada teknolojiyadda ah: hababka kiimikada iyo cilmiga noolaha. Kuwaas waxaa ka mid ah, soosaar sanadle ah oo ah 300,000 tan oo ah qalabka soosaarka ethanol ee shidaalka iyadoo la adeegsanayo gaaska wershadaha birta ah, soosaar sanadle ah oo gaaraya 15,000 tan oo ah aaladda ethanol ee muujinta ethyl iyadoo la adeegsanayo gaaska noolaha, iyo 10,000 tan oo ah aaladaha qalabka ee 1,6-hexane ayaa ah tiknoolajiyaddeena madaxbanaan. shantii sano ee la soo dhaafay.
Awoodda wax soosaarka hadda: 150,000 tan oo Ethyl Ethanol ah, 300,000 tan oo ah Ethyl Acetate, 50,000 tan oo ah Alkohol la cuni karo, 15,000 tan oo ah N-propyl acetate, 10,000 tan oo ah 1,6-hexanediol, iyo 4000 tan oo ah Enzyme.